Mummy Halloween mora atao amin'ny ankizy | Asa tanana
Maria Jose Roldan | | asa-tanana, Asa tanana Halloween, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Ity mamanay mora atao amin'ny ankizy ity dia mety amin'ny haingo an-trano na ho an'ny efitranon'ny zaza. Tena mora ny manao ankizy dia hankafy ny famoronana ny mamanany mampihomehy. Mety ho asa tanana tsara mihitsy aza izany any am-pianarana miaraka amin'ireo mpianatra amin'ny kilasy plastika hiasa asa-tanana Halloween.
Amin'ny maha-asa tanana mora azy io, dia azo atao amin'ny ankizy mihoatra ny 4 taona eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe, fa ho an'ireo ankizy lehibe efa manana fahaizana manapaka amin'ny hety, dia afaka manao azy tsy miankina izy ireo. manaraka ny torolalana nomen'ny olon-dehibe.
1 Fitaovana ilainao
2 Ahoana ny fomba fanaovana asa-tanana
Tady fotsy 1
Maso mihetsika 2
Taratasy fidiovana 2 baoritra
Ahoana ny fomba fanaovana asa-tanana
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia manapaka ny iray amin'ireo baoritra taratasy fidiovana amin'ny antsasany ary rehefa azonao izany, amin'ny pensilihazo, saryo izay ho sandry sy tanànan'ny mamanay. Vantany vao nosarihanao izy ireo, dia tapaho izy ireo ary tahirizo rehefa avy eo.
Raiso ny baoritra iray hafa amin'ny taratasy fidiovana ary ario miaraka amin'ny tadin'ny fehiloha fotsy, apetraho ao anaty baoritra ny tendrony iray, araka ny hitanao eo amin'ny sary. Raha vao tratra io faran'ny io, miaraka amin'ny tady manodidina ny baoritra araka ny fahitanao ny sary. Manodidia ny baoritra rehetra mandra-paha-fonony azy tanteraka amin'ilay tady fotsy. Rehefa fonosina amin'ny tady fotsy ny baoritra rehetra, tapaho ny tadiny amin'ny faran'ny farany ary apetaho ao anaty ny baoritra toy ny nataonao tany am-piandohana
Avy eo makà maso mihetsika roa ary sokafy kely ny tady fotsy mba hifanaraka amin'ny maso mihetsika. Ho tahaka ny hitanao amin'ny sary izy ireo, tsy mila mametaka lakaoly na zavatra hafa ianao satria mety tsara. Farany, raiso ny sandriny natokana ary apetraho araka ny hitanao amin'ny sary. Apetaho avy ao aoriana izy ireo amin'ny kasety kely mba hahafahany miraikitra tsara ary eo anoloana izy ireo araka ny hitanao.
Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ny reninao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Mumi Halloween mora atao amin'ny ankizy